IFP: Ukhongolose Awuyeke Ukuba Abazenzisi Odabeni Lokubuyisana – Inkatha Freedom Party
IFP: Ukhongolose Awuyeke Ukuba Abazenzisi Odabeni Lokubuyisana
Iqembu leNkatha esifundazweni saKwaZulu-Natali selinxuse iqembu le-ANC ukubai liyeke ukuba abazenzisi odabeni lokubuyisana njengoba elikukhulumayo kungahambisani nezenzo.
Umholi we-IFP eSishayamthetho saKwaZulu-Natali uMnu Blessed Gwala ngesikhathi kunenkulumo-mpikiswano phakathi kwamaqembu ezombusazwe ngodaba lokubuyisana iReconciliation Day namhlanje uthe “Kuyinkinga ukuthi i-ANC ingasukuma eSishayamthetho ikhulume ngesikhulu isibindi ngodaba lokubuyisana ekubeni lingayiphili into eliyikhulumayo. Leliqembu lahlinzela iqembu leNkatha ezibini ngokuthi lisungule iqembu le-NFP ngenhloso yokuthi iNkatha ibhujiswe ukuze iphenduke isicacogwana.
Lokhu kwashiwo ngisho uMongameli we-IFP uMntwana waKwaPhindangene ePhalamende likaZwelonke phambi kukaMongameli weZwe uMhlonishwa uJacob Zuma kodwa kuze kube namhlanje akakaze ayiphendule leyonkulumo. Bukhona ubufakazi balokho obuqoshiwe,”
“Besicabanga ukuthi uma uKhongolose uzoba sophondweni ekuholeni umkhankaso wokuthelelana amanzi phakathi kwawo neqembu leNkatha lapha esifundazweni kodwa lutho lokho akwenzeki. Okunye okusicasulayo njengeqembu leNkatha indaba yokuthi uKhongolose uma kunenkinga uthi sonke asibambisane kodwa uma sekukuhle iwona wodwa ozichoma uphaphe lwegwalagwala. Sitshelwa ngokuthi asisukume sakhe kodwa uKhongolose wakha wodwa thina njengamanye amaqembu usushiye ngaphandle.
Ubufakazi balokhu iloludaba lwaloluhlelo lukahulumeni wesifundazwe okuthiwa uSukuma Sakhe lapho ongqongqoshe beqembu likaKhongolose beholwa uMhlonishwa uNdunankulu baye bahambe bodwa basishiye thina uma beyodlulisa izijumbana zempuphu kanye nezikhwama zenyama yenkukhu uma kunokhetho. Uma ubhekake konke lokhu ungasho kanjani ukuthi kumele kuthelelwane amanzi buyiswane ngokuphelele. Mhla uKhongolose wakwazi ukumela ukubuyisana ngokuphelele ilapho sonke siyovumelana khona ngazwi linye sithi impela ukubuyisana sekukhona lapha KwaZulu-Natali,” kuphetha uGwala.
Mnu Blessed Gwala MPL,
uMholi weIFP eSishayamthetho saKwaZulu-Natali
078 290 58 42